SKYPE ကိုအပေါ်မက်ဆေ့ခ်ျမပို့ပါနဲ့ - SKYPE ကို - 2019
Skype ကိုပြဿနာ: မက်ဆေ့ခ်ျမပို့
Skype ကိုအတူလုပ်ကိုင်သည့်အခါအသုံးပြုသူများကိုကြုံတွေ့ရစေခြင်းငှါပြဿနာတွေတွေထဲမှာကျနော်တို့မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း၏မဖြစ်နိုင်ဖော်ပြထားခြင်းသငျ့သညျ။ ဤလက်ထက်, အတော်လေးမနှစ်မြို့ဖွယ်တစ်ဦးအလွန်ဘုံပြဿနာမဟုတ်ပေမယ်။ ၏ Skype နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျမပို့လျှင်တရာလုပ်ဖို့သင်ယူကြပါစို့။
Method ကို 1: အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်စစ်ဆေးမှုများ
အခြားပါတီသတင်းစကား Skype ကိုအစီအစဉ်ကိုပေးပို့ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းမပြုမီ, အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုစစ်ဆေးပါ။ အဲဒါကိုမဟုတ်ကြောင်းတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပြီး, အထက်ဖော်ပြပါပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကသင်မက်ဆေ့ခ်ျကို recover လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျသီးခြားဆွေးနွေးမှုများအတွက်ကြီးမားသောခေါင်းစဉ်တည်းဟူသောထားပြီးအမှား၏အမြစ်အကြောင်းမရှိရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာစတာတွေဟာ service provider ကအဘို့အနှောင်းပိုင်းတွင်ငွေပေးချေမှု၌ပေးဘက်မှာပြဿနာတွေငှါ, Equipment (ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ကဒ် modem, Router က, etc) ၏ချွတ်ယွင်းရန်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မှားသည်အင်တာနက် setting တွင်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,
အတော်လေးမကြာခဏပြဿနာရိုးရှင်းတဲ့ modem ပြန်လည်စတင်ခွင့်ပြုဖြေရှင်းနိုင်။
Method ကို 2: ဒိတ်လုပ်ပါသို့မဟုတ် reinstall
သငျသညျ Skype ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို အသုံးပြု. မရနေတယ်ဆိုရင်, တကမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းပြချက့်စေနိုင်ပါတယ်။ , ဖြစ်သော်လည်းဤအကြောင်းအဘို့, စာမဟုတ်ဒါကြောင့်မကြာခဏစေလွှတ်ပေမယ့်ဒီအခွင့်အရေးကိုလျစ်လျူရှုမည်မဟုတ်ပါတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ Skype ကိုမကြာသေးမီကဗားရှင်းကိုအပ်ဒိတ်လုပ်။
ထို့အပွငျ, သင်အစီအစဉ်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအသုံးပြုနေလျှင်ပင်, ထို့နောက်တစ်ဦး Skype ကို၏အစီအစဉ်ကိုပြန်လည် install ပြုလုပ်မဖယ်ရှားကူညီစေခြင်းငှါမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အပါအဝင်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြန်လည်စတင်သောရိုးရှင်းတဲ့စကား, ပြန်လည် install ပြုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 3: Reset
Skype ကိုအပေါ်တစ်ဦး Message ပေးပို့ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းများအတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက် program ကို setting တွင်ပြဿနာများဖြစ်ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့ reset ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်ဤတာဝန်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုများအတွက်တမန် algorithms ၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းပါ။
Skype ကို 8 မှာ setting များကို Reset နှင့်အထက်
ထိုခဏခြင်းတွင် Skype ကို 8 အတွက် setting များ reset ဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်းစားပါ။
ဒါကြောင့်လက်ရှိလည်ပတ်နေလျှင်ပထမဦးစွာသင်, တမန်အတွက်အလုပ်ဖြည့်စွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (စနစ်ဗန်းထဲမှာ Skype ကို၏အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, right-clickPKM) ထိုတိုးချဲ့စာရင်းထဲက, ရာထူးကို select "Skype ကိုထဲက Get".
ကီးဘုတ်ပေါင်းစပ်အပေါ် Skype ကိုရိုက်ထည့်မထွက်ပြီးနောက် ဦးဝင်း + R ကို။ အမိန့်များခင်းကျင်းပြသ window ထဲမှာ Enter:
ဖွင့်လှစ် "Explorer ကို" directory ထဲတွင် "Microsoft က"။ သငျသညျအထဲတွင်လို့ခေါ်တဲ့ directory ကိုတွေ့ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ် "Desktop ကိုများအတွက် Skype ကို"။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ PKM ပေါ်လာမည့်စာရင်းထဲကတစ်ခု option ကို select လုပ်ပါ "Cut".
အဆိုပါကိုသွားပါ "Explorer ကို" အခြားမည်သည့်ကွန်ပျူတာဖိုင်တွဲထဲမှာပြတင်းပေါက်တစ်ခုအချည်းနှီးသောအာကာသပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ PKM ကာ option ကို select လုပ်ပါ "ထည့်".
မူရင်းတည်နေရာကနေဖြတ် profile များကိုအတူဖိုလ်ဒါကိုတပြိုင်နက်, Skype ကိုစတင်ပါ။ အဝင်ဝမှာအလိုအလျောက် run ဖို့မတိုင်မီရင်တောင်ဒီအချိန်အားလုံး settings ကို reset ခဲ့ကြသကဲ့သို့, ခွင့်ပြုချက် data တွေကိုရိုက်ထည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဖွင့်သွားပါစေ".
ကလစ်နှိပ် Now ကို "၌ Log သို့မဟုတ်ဖန်တီး".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, username နှင့်ကလစ်နှိပ်ရိုက်ထည့်ပါ "Next ကို".
လာမယ့် window ထဲတွင်သင့်အကောင့်မှသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါနဲ့ click နှိပ် "ဝင်မည်".
program ကိုစတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းရှိမရှိ check လုပ်ပေးပါတယ်။ ရှိသမျှကောင်းသွားပါလျှင်ဘာမှမပြောင်းပါဘူး။ သို့သျောလညျးသငျသညျကို manually ကျွန်တော်ယခင်ကခရီးထွက်ခဲ့သောအဟောင်းပရိုဖိုင်းကိုဖိုင်တွဲကနေ (ထိုကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်ကဲ့သို့) အချို့သောဒေတာလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဆာဗာကနေတင်းကျပ်အလိုအလျောက် Skype ကို၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက်ထုတ်ပေးသောသစ်ကိုပရိုဖိုင်းကို directory ကိုစတင်ဆောင်ပါလိမ့်မည်သို့သော်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဤမလိုအပ်ပါဘူး။
သို့သော်အဘယ်သူမျှမအပြုသဘောပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်လှေတျတျောမူမညျမဟုတျမညျမဟုတျပါကပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခြားအချက်တစ်ချက်တည်ရှိသည်ဆိုလိုသည်။ ထိုအခါသင်သည်ထို program အသစ်ကပရိုဖိုင်းကို directory ကိုဖျက်ပစ်မှထွက်ရန်နိုငျသညျ, နှင့်၎င်း၏အရပ်ဌာန၌ယခင်ကပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကွောငျးတစျခုပြန်သွားပါ။
အဲဒီအစားရွေ့လျားလည်းအမည်ပြောင်းရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါအဟောင်း folder ကိုအတူတူ directory ထဲတွင်ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား name ကိုပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါခြယ်လှယ်တစ်ဦးအပြုသဘောရလဒ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလျှင်, ရိုးရိုးသစ်ကိုပရိုဖိုင်းကို directory ကို delete နှင့်အဟောင်းမူရင်းအမည်ဖြင့်ပြန်သွားပါ။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Skype ကို7မှာ setting များကို Reset နှင့်
သင်ဆဲဤအစီအစဉ်၏ Skype ကို7သို့မဟုတ်အစောပိုင်းကဗားရှင်းအသုံးပြုနေလျှင်, သင်အလားတူထိန်းသိမ်းရေးအရေးယူ vysheopisyvaemym စေရန်ရှိသည်, ဒါပေမဲ့တခြား directory များတွင်ပါလိမ့်မယ်။
program ကို Skype ကိုပိတ်။ ထို့နောက် key combination ကိုနှိပ် ဦးဝင်း + R ကို။ ပြတင်းပေါက် "Run ကို" တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပါ "% Appdata%" quotation သင်္ကေတမရှိ, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
အဆိုပါဖွင့်လှစ် folder ထဲမှာ, ဖိုင်တွဲကိုရှာဖွေ "Skype ကို"။ ဒါကြောင့်ကို reset ဖန်ဆင်းနိုင်သုံးလမ်းရှိပါတယ်:
အခြား directory ကိုရွှေ့ရန်။
အမှန်မှာသင်တစ်ဦးဖိုလ်ဒါကိုဖျက်ပစ်သောအခါအကြောင်း "Skype ကို"အားလုံးသင့်ရဲ့စာပေးစာယူနှင့်အချို့သောအခြားသတင်းအချက်အလက်ဖကျြဆီးခံရပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, နိုင်, ပြီးနောက်ဤအချက်အလက်ဖိုင်တွဲကိုအမည်ပြောင်းသို့မဟုတ်သင့် hard drive ကိုအပေါ်အခြား directory ကိုကလှုံ့ဆျောပေးသငျ့ဖြစ်စေ restore ။ ကျနော်တို့ကလုပ်နေတာ။
ယခုအစီအစဉ်သည် Skype ကိုစတင်ပါ။ ဘာမျှမဖြစ်ပျက်လျက်, မက်ဆေ့ခ်ျမပို့ခဲ့နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်က setting တွင်ပေမယ့်အခြားအရာတစ်ခုခုအတွက်မဟုတျကွောငျးဖော်ပြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပဲအရပျသို့ဖိုင်တွဲ "Skype ကို" ပြန်လာ, သို့မဟုတ်ပါကနောက်ကျောကိုအမည်ပြောင်း။
အဆိုပါမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ပြန် program ကိုပိတ်လိုက်, နှင့်အမည်ပြောင်းဒါမှမဟုတ်ဖိုလ်ဒါကိုပြောင်းရွေ့၏, ဖိုင်ကို copy main.dbထိုအခါအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ Skype ကိုဖိုင်တွဲရွှေ့။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့သောဖိုင်ထဲမှာဖြစ်ပါသည် main.db သိမ်းဆည်းထားသင့်ရဲ့စာပေးစာယူမော်ကွန်းတင်နှင့်ဒီဖိုင်ထဲမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး bug ကိုနောက်တဖန်ဖြစ်ပေါ်ဖို့စတင်လျှင်ထိုကွောငျ့, ထို့နောက်တစ်ဦးထက်ပိုသောအချိန်အထက်တွင်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြန်လုပ်ပါ။ ယခုမူကား file main.db ကျနော်တို့ပြန်မသွားကြပါဘူး။ အဆိုပါမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်စွမ်း, ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းစာပေးစာယူ၏ထိန်းသိမ်းခြင်း: ကံမကောင်းစွာ, ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကျနော်တို့အရာနှစ်ခုထဲကတစ်ခုရွေးရန်ရှိသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင် ပို. အသိဥာဏ်ကိုပထမဦးဆုံး option ကိုရွေးပါ။
Android နှင့် iOS ကိရိယာပေါ်မှာမရရှိနိုင် Skype ကို app ရဲ့မိုဘိုင်းဗားရှင်းမှာတော့လွန်း, မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့နိုင်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နိုင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာ၏အမှု၌ဆင်တူအများအပြားအရိုအသေအတွက်ဤပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ပေမယ့်နေဆဲ operating system မြား၏အင်္ဂါရပ်များအားဖြင့်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ မှအထွေထွေ algorithm ကို
မှတ်ချက်: အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအများစုကအညီအမျှနှင့် iPhone, Android ပေါ်မှာထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့ဒုတိယသုံးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှုကိုပထမဦးဆုံးပေါ်ပြပါလိမ့်မည်။
, ဆယ်လူလာသို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်အလှနျအရေးကွီးဖွစျသညျမ - ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်ကမိုဘိုင်း device ကိုအွန်လိုင်းကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါ့အပြင်ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲနှင့် Skype ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းက operating system ကို၏အလွန်အမင်းနှစ်လိုဖွယ်လက်ရှိ version ကို install လုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ မဖြစ်လျှင်, ပထမဦးဆုံးလျှောက်လွှာနှင့် (သင်တန်း၏, ဖြစ်နိုင်လျှင်) အ OS ကို update လုပ်, သာထို့နောက်အောက်တွင်ဖော်ပြအကြံပြုချက်များသွားရောက်လည်ပတ်မည်။ အဟောင်းတွင်ကောင်းကင်တမန်၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းစွာအာမခံမထားဘူး devaysakh ။
အင်တာနက်ကို Android ပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးမယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကို
အန်းဒရွိုက် applications များအပေါ် Update ကို
အဆိုပါ operating system ကို Android မှာအသစ်ပြောင်းခြင်း
နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း IOS ကို update ကို
iPhone ပေါ်မှာအသစ်ပြောင်းခြင်း apps များ
Method ကို 1: အတင်းအဓမ္မထပ်တူ
စာ Skype ကိုအပေါ်သင့်မိုဘိုင်းမှမပို့နိုင်လျှင်လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာအရာများအတွက်အထူးအဖွဲ့အကောင့်အချက်အလက်များ၏ထပ်တူ enable ရန်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦး Skype ကိုချက်တင်အတွက်မဆိုဖွင့်ပါ, ဒါပေမယ့်သူကမက်ဆေ့ခ်ျအတိအကျကိုစလှေတျထားတဲ့အတွက်တဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ဒီလိုလုပ်ဖို့နဲ့ tab ထဲမှာပင်မမျက်နှာပြင်ကိုသွား "ချတ်များ" ပြီးတိကျတဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုရွေးပါ။
(သူမ၏လက်ချောင်းပေါ်သို့ကိုင်နှင့် pop-up menu ကိုအတွက်သင့်တော်တဲ့ item ကိုရွေးချယ်ခြင်း) ကိုအောက်ပါ command ကို paste နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ (ထပ်တူညီသလား) ဝင်ဘို့လယ်ပြင်သို့ထည့်သွင်း။
အခြားပါတီဖို့ command ကိုပို့ပါ။ အပ်ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်း, ဤဖြစ်ပျက်မှန်လျှင်, Skype ကို restart ချလိုက်ပါ။
ခဏ မှစ. မိုဘိုင်းတမန်အတွက်မက်ဆေ့ခ်ျများအပေါ်စနစ်တကျစေလွှတ်ပေမယ့်မမိလျှင်, ဤဆောင်းပါး၏အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းရလိမ့်မည်။
Method ကို 2: သန့်စင် data တွေကို cache နဲ့
မသင်မနေရဒေတာထပ်တူစာပို့ function ကို recover မပါဘူးဆိုရင်, ပြဿနာရဲ့ဖွယ်ရှိအကြောင်းရင်းမှာ Skype ကိုအတွက်ရှာကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဤလျှောက်လွှာများအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုစဉ်အတွင်းအခြားမည်သည့်အဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူဖြစ်ကြပြီးဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်ရာမှတစ်ဦးအမှိုက်တွေဒေတာ, ကြီးထွားနိုင်ဘူး။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤအမှုကိုပြုသောသည်:
မှတ်ချက်: လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်မှာ Android-powered devices များတွင်လည်း Store က App ကိုဒေတာ Play Google ၏ cache ကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Settings" ကို စက်ကိရိယာနှင့် go "Applications ကိုနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ" (ဒါမှမဟုတ်ရုံ "Applications ကို"အမည်) OS ကိုအပေါ်မူတည်ပါသည်။
လူအပေါင်းတို့ကို install applications များစာရင်းတစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါသင့်လျော်သောမီနူးကို item ရှာဖွေမတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သူ၏နာမအတွက် Play စတိုးနှင့် tapnite ဖော်ပြချက်နှင့်အတူစာမျက်နှာခုန်လျှင်ကြည့်ပါ။
ကို Select လုပ်ပါ "သိုလှောင်"ပြီးတော့တခြားခလုတ်နှိပ် "Clear ကို cache ကို" နှင့် "Clear ကိုဒေတာ".
ဒုတိယကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လုပ်ရပ်များကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ် "Yes" ကို pop-up window ကို။
Skype ကိုအတူအတူတူပါပဲပြု app store ကို "Reset" ။
ယင်း၏သတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာကိုဖွင့်, သွားပါ "သိုလှောင်", "ဟုအဆိုပါ cache ကိုရှင်းလင်း" နှင့် "Erase ဒေတာများ"သင့်လျော်သော button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android မှာပေါ် cache ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Settings" ကို, Scroll ပစ္စည်းများစာရင်းကတဆင့်အနည်းငယ်ဆင်းရှိတင်ဆက်နှင့်ကို select "အခြေခံ".
ထို့နောက်ကိုသွား "IPhone ကိုသိုလှောင်" လိုအပ်ပါက tapnut ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ရာ၏ Skype ကိုလျှောက်လွှာ, သည်အထိစာမကျြနှာကိုဆင်း scroll ။
မိမိအစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြီးတာနဲ့ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒေါင်းလုပ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအစီအစဉ်ကို" နှင့်ပေါ့ပ်အပ်ဝင်းဒိုးမှာသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတည်ပြုပါ။
အခုတော့ဖြုတ်တံဆိပ်များအပေါ် tapnite "ဟုအဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပြန် install လုပ်" နှင့်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ပြီးစီးဘို့စောင့်ပါ။
သင့် iOS ပေါ်တွင် cache ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
မည်သို့ပင် device ကိုကထည့်သွင်းထားတဲ့ operating system ကို၏သည် cache နဲ့ data တွေကိုရှင်းလင်းရေး, settings ကိုပိတ်ပြီး, Skype ကိုဖွင့်လိုက်ပါက Re-ရိုက်ထည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကနေ login နဲ့ password ကိုကတည်းကလည်းသူတို့ကခွင့်ပြုချက် form မှာသတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်, ဖျက်ပါပြီ။
ပထမဦးဆုံးအနှိပ်ခြင်းဖြင့် "Next ကို"ပြီးတော့ "ဝင်မည်", အပလီကေး၏ပထမဦးဆုံးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကို Perform သို့မဟုတ်ပါကလက်လွတ်။ မည်သည့်ချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းကိုရွေးချယ်ပါနှင့် Message ပေးပို့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ အခါပြဿနာသွားသောဤဆောင်းပါး၌ထည့်သွင်းစဉ်းစား - ဂုဏ်ပြုလွှာ - မရလျှင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ပို. အကြီးအကျယ်အစီအမံပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုဆက်ကပ်။
Method ကို 3: application ကို Reset
အများစုကတော့ applications များ၏အများစုအတွက်ပြဿနာကသူတို့ cache နဲ့ data တွေကိုရှင်းလင်းဖြေရှင်းနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံဒီအလုံအလောကျမဟုတျပါဘူး။ ပင် "သန့်ရှင်းတဲ့" ဟု Skype ကိုနေတုန်းပဲပထမဦးဆုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကို Google Store ကိုသို့မဟုတ်သင် device ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုမဆို App Store မှာ, Play reinstall, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ကပြန်ညှိမှုရှိရမည်အရာအမှု၌မက်ဆေ့ခ်ျများ, ပို့ချင်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။
မှတ်ချက်: ကို Google Play Store အား "ကို reset" ကိုအန်းဒရွိုက်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet တွင်, သငျသညျယခင်နည်းလမ်း (တစ်စိတ်တစ်ဒေသ၏ခြေလှမ်းများ 1-3 ဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုပြန်လုပ်ပါရန်ရှိသည် "အန်းဒရွိုက်") ။ ထိုမှသာ Skype ကို reinstall လုပ်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
Android ပေါ်မှာဖယ်ရှားခြင်း applications များ
iOS ကိုအပေါ်ကိုဖယ်ရှားခြင်း applications များ
Skype ကိုပြန်လည်မိမိတို့ username နဲ့ password ကိုအောက်မှာရိုက်ထည့်ပါနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့ဖို့ထပ်မံကြိုးစားပါ။ ထိုပြဿနာကိုပြေလည်လျှင်, ဤအချိန်, ထို့နောက်ထိုသို့အကြောင်းပြချက်ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြရန်သောအမှုအများကအရမ်းအကောင့်ထဲမှာတည်ရှိသည်။
Method ကို 4: အသစ်တစ်ခုရဲ့ login Add
ကြောင့်အကြံပြုချက်များအထက်ဖော်ပြထားတဲ့အပေါင်းတို့၏အကောင်အထည်ဖော်ရေး (သို့မဟုတ်သူတို့ထဲကပဲစိတျအပိုငျးယုံကြည်ချင်) အားတစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်အနည်းဆုံးအများဆုံးကိစ္စများတွင်, Skype ကို၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းနှင့်အတူထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကမ, ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ပြုလုပ်တမန်အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်မှတစ်ဦးရဲ့ login အဖြစ်အသုံးပြုသောမူလတန်းက e-mail ကိုပြောင်းလဲရန်, အမည်ရ, ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်, ကြှနျုပျတို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ, အဘယ်ကြောင့်မဒီဘာသာရပ်အပေါ်မြို့၌နေကြသတည်း။ အောက်ကလင့်ခ်မှာဆောင်းပါးအထဲက Check ကြောင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သမျှသောသူတို့လုပ်ပါ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: Skype ကို၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းရဲ့ login ပြောင်းခြင်း
ဆောင်းပါးကနေနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါကြောင့် Skype ကိုအပေါ်တစ်ဦး Message ပေးပို့ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရတဲ့အကြောင်းရင်းအများအပြားရှိပေမည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်က PC ကိုဗားရှင်း applications များမှကြွလာမှာအနည်းဆုံးအခါ, ချဆက်သွယ်ရေး၏ရိုးရှင်းမရှိခြင်းထံသို့မရောက်ရ။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တွင်, သောအရာတို့ကိုကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုပြဿနာများ၏အကြောင်းတရားများအချို့ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရပြီစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှုလုပ်သင့်တယ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်။ သို့သော်ကျနော်တို့ကဒီပစ္စည်းကိုသင်တို့အဘို့အအသုံးဝင်သောဖြစ်ပြီးအဓိက function ကို messenger ကိုလျှောက်လွှာ recover ကူညီတော်မူကြောင်းကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။